क्लिमोग्राम के हो र यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? नेटवर्क मौसम विज्ञान
यदि तपाईंले मौसम पूर्वानुमान प्राय: देख्नुहुन्छ भने तपाईंले यो शब्द सुन्नुहुनेछ क्लाइमग्राम। यो एक उपकरण हो जुन मौसम विज्ञानमा दुई भन्दा धेरै प्रयोग भ्यारीएबलहरू प्रतिनिधित्व गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ: वर्षा र तापक्रम। एक क्लिमोग्राम ग्राफ भन्दा बढि केहि होइन जहाँ यी दुई चरहरू प्रतिनिधित्व गरिन्छ र उनीहरूको मान स्थापना हुन्छ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कसरी जलवायु चार्टले कार्य गर्छ र कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्ने सिक्छ? यस पोष्टमा हामी तपाईलाई सबै कुरा पूर्ण व्याख्या गर्दछौं
1 एक जलवायु चार्ट को विशेषताहरु
2 प्रयुक्त उपकरणहरू
3 थपिएको जानकारी
4 क्लाइमोग्रामको टिप्पणी
5 मेडिटेरियन क्लेमोग्राफ
6 इक्वेटोरियल मौसम ग्राफ
7 उष्णकटिबंधीय मौसम
8 कन्टिनेन्टल क्लाइमोग्राफ
9 समुद्री मौसम ग्राफ
10 ध्रुवीय क्लाइमग्राम
11 कसरी एक जलवायु चार्ट बनाउन
एक जलवायु चार्ट को विशेषताहरु
वैज्ञानिक शब्दावलीमा यो प्रकारको ग्राफ भन्नु ठीक हुन्छ ओम्ब्रोथर्मल रेखाचित्रको रूपमा। यो किनभने "ओम्ब्रो" को मतलब वर्षा र तापीय तापमान हो। यद्यपि सामान्यतया समाजका लागि यसलाई क्लाइमोग्राम भनिन्छ। एक मौसम वर्णन गर्न सबै भन्दा महत्वपूर्ण चर वर्षा र तापमान हो। तसर्थ, यी रेखाचित्रहरू मौसम विज्ञानमा यत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
रेखाचित्रमा प्रतिबिम्बित डाटा मौसम स्टेशनमा संकलन गरिएको छ। औसत मानहरू प्रत्येक महिना प्रवृत्ति जान्नको लागि प्रतिनिधित्व गरिन्छ र त्यो डाटा महत्त्वपूर्ण छ। एक जलवायु को प्रवृत्ति र व्यवहार रेकर्ड गर्न, डाटा तिनीहरू कम्तिमा १ 15 बर्षको लागि दर्ता हुनुपर्दछ। अन्यथा यो मौसम डाटा होईन, तर मौसम डाटा।
वर्षाले वर्षको संख्याले भाग गरेर महिनामा संकलन गरिएको वर्षाको कुल व्यक्त गर्दछ। यस तरिकाले तपाईलाई कुनै ठाउँको औसत वार्षिक वर्षा थाहा हुन्छ। जस्तो कि यो सधैं एकै तरीकाले वा समान अवधिमा वर्षा हुँदैन, एक औसत बनाइन्छ। त्यहाँ डाटा छन् जुन सामान्य स्थापना गर्न सेवा गर्दैन। यो धेरै सुक्खा वा विपरित, धेरै वर्षा भएको कारण बर्ष हो। यी असामान्य वर्षहरू अलग अध्ययन गर्नुपर्दछ।
यदि धेरै धेरै वर्षा र अन्य ड्रायर वर्षहरूको उपस्थिति केहि बारम्बार वा चक्रीय हो भने, यो क्षेत्रको मौसम भित्र समावेश हुन्छ। तापक्रमको प्रतिनिधित्व वर्षाको सन्दर्भमा अलिक फरक हुन्छ। यदि त्यहाँ एक मात्र वक्र छ भने, प्रत्येक महिनाको लागि औसत तापक्रम उपचार गरिन्छ। यो वर्षको संख्या द्वारा जोडियो र विभाजित गरिएको छ। यदि त्यहाँ तीन वक्र छन् भने, माथिल्लो भनेको अधिकतम तापक्रमको मध्यम हो, बीचको एक कुल औसत र तल्लो एक न्यूनतमको मध्य हो।
अधिकांश जलवायु चार्टहरू प्रयोग गर्दछन् गौसेन आर्द्रता सूचकांक। यो अनुक्रमणिका मानिन्छ कि त्यहाँ तापक्रमको एक निश्चित स्तर छ जब तापक्रमको औसत वर्षाको औसत भन्दा दोब्बर हुन्छ।
यस तरिकाले, क्लाइमोग्रामको यो संरचना छ:
पहिले, एक abscissa अक्ष जहाँ बर्ष को महीनाहरु सेट छन्। त्यसपछि यससँग दायाँपट्टि अक्षमा अक्ष हुन्छ जहाँ तापक्रम मापन राखिएको हुन्छ। अन्तमा, अर्को अर्डेट अक्ष बायाँपट्टि, जहाँ वर्षा स्केल राखिएको छ र जुन दुई गुणा तापक्रम हो।
यस प्रकारले, यो सिधा अवलोकन गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ आर्द्रता छ भने वर्षा को वक्र तापक्रम भन्दा कम छ। Climogram मान तिनीहरूले उपाय को मूल्य जान्न महत्वपूर्ण हुनु पर्छ। त्यो हो, तपाईंले अन्य डेटा दिनुहोस् जस्तै मौसम स्टेशन, नापिएको वर्षाको कुल संख्या र औसत वार्षिक तापमान।
मानको आधारमा अन्त्यमा मौसम चार्टहरूको उपस्थिति भिन्न हुन सक्दछ। सब भन्दा विशिष्ट एक बार हो जुन रातो रेखा द्वारा बार र तापक्रम द्वारा वर्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सरल हो। यद्यपि त्यहाँ केहि जटिल छन्। यो क्रमशः नीलो र रातो रेखा र दुबै वर्षा र तापक्रम प्रतिनिधित्व गर्ने बारे हो। विवरणहरू जस्तै सेडि and र रंगिंग पनि थप गरियो। यो अत्यन्त सुक्खा समयको लागि पहेंलो रंगको हुन्छ। निलो वा कालो धाराहरू १००० मिलिमिटर भन्दा कमको वर्षा inतुमा राखिन्छन्। अर्कोतर्फ, गहिरा निलोमा महीना जुन यो १००० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुन्छ र colored्गीन हुन्छ।
यदि हामी चाहानुहुन्छ भने अझ बढी जानकारी जलवायु चार्टमा थप्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, अधिक जानकारी थपेमा बिरुवाले सहनु पर्ने मौसम अवस्था थाहा पाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। कृषिमा योगदान पुर्‍याउँदा यो धेरै उपयोगी हुन्छ।
सबै भन्दा बढि क्लाइमोग्राम भनिन्छ वाल्टर-लिथ आरेख। यो एक रेखा संग प्रतिनिधित्व तापमान र वर्षा दुबै संग विशेषता हो। यो पनि महीना अन्तर्गत एक पट्टी छ कि कसरी अक्सर frosts देखा पर्दछ।
यस रेखाचित्रको अतिरिक्त जानकारी जुन अरूसँग छैन त्यो होः
एनटी = तापक्रम अवलोकन गर्ने वर्षहरूको संख्या।
एनपी = वर्षा अवलोकन गर्दै वर्षहरूको संख्या।
टा = निरपेक्ष अधिकतम तापमान।
T '= वार्षिक निरपेक्ष अधिकतम तापमानको औसत।
Tc = न्यानो महिनाको अधिकतम दैनिक तापमानको औसत।
T = अधिकतम तापक्रमको माध्य।
Osc = थर्मल दोलन। (Osc = Tc - tf)
t = न्यूनतम तापमानको औसत।
tf = चिसो महिनाको दैनिक न्यूनतम तापमानको औसत।
t '= वार्षिक निरपेक्ष न्यूनतम तापमानको औसत।
टा = निरपेक्ष न्यूनतम तापमान।
tm = औसत तापमान। (tm = T + t / २ वा tm = T '+ t' / २)
पी = मतलब वार्षिक वर्षा।
h = मतलब घामको वार्षिक घण्टा।
एचएस = सेफ फ्रोस्ट्स
Hp = सम्भावित frosts
d = शीतमुक्त दिन।
कालो क्षेत्रको मतलब त्यहाँ अत्यधिक पानी छ।
डटेड क्षेत्रको अर्थ पानीको घाटा हो।
थोरन्थवेट ग्राफमा पानीको बाफ सन्तुलनको कार्यको रूपमा जलवायुको विशेषताहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जब हामी कुनै क्षेत्रको जलवायु चार्ट देख्छौं, यसमा टिप्पणी र यसको व्याख्या सरल छ। हामीले हेर्नु पर्ने पहिलो कुरा वर्षा वक्र हो। जहाँ हामी कुल वर्षा र यसको वितरण बर्ष र महिना भर संकेत गर्दछ। थप रूपमा, हामी अधिकतम र न्यूनतम स्तरहरू के भएको पत्ता लगाउन सक्छौं।
अब हामी तापक्रम वक्रमा हेर्नेछौं। यो हामीलाई बताउँछ कि एक छ औसत तापमान, वार्षिक थर्मल दोलन र वर्षभरि वितरण। हामी तातो र चिसो महिनाको विश्लेषण गर्न सक्दछौं र तापमानलाई अन्य वर्षहरूको साथ तुलना गर्न सक्दछौं। यो प्रवृत्ति अवलोकन गरेर हामी एक क्षेत्रको मौसम थाहा पाउन सक्छौं।
हाम्रो भूमध्य मौसममा औसत वर्षा मानहरू र वार्षिक तापमान छ। यी मानहरू जलवायु ग्राफमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ प्रत्येक बर्ष डाटाको एक विचार प्राप्त गर्न। यो मुख्यत: वर्षभरि कम वर्षा मानहरू भएको विशेषताले हो। जाडो र वसन्त महिनाहरूमा वर्षाको बृद्धि देख्न सकिन्छ, नोभेम्बर र मार्चमा दुई अधिकतम।
तापमान को रूप मा, तिनीहरू धेरै हल्का छन्। जाडोमा १० डिग्री सेल्सियस भन्दा तल नखानुहोस् र गर्मीमा तिनीहरू around० डिग्री सेल्सियसको आसपास हुन्छन्।
इक्वेटोरियल मौसम ग्राफ
अर्कोतर्फ, यदि हामी इक्वेटोरियल जोनको हावापानीको विश्लेषण गर्‍यौं भने हामी विभिन्न डाटा भेट्टाउँछौं। वर्षा मानहरू वर्षको अवधिमा उच्च हुन्छन्, जस्तै तापक्रम। तपाईं अधिकतम mm०० मिलिमिटर वर्षा अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ र तापक्रम कायम राखिन्छ स्थिर वर्षभरि २ 25 डिग्री सेल्सियस।
यस अवस्थामा हामी प्रशस्त वर्षाको मौसम भेट्टाउँछौं, जुन जुन र जुलाई महिनामा पुग्ने अधिकतमसँग। यी वर्षा चुचुरोहरू यस मौसमको विशेषता वर्षाका कारण हुन्: मानसुन। गर्मी महिनामा वर्षाको उच्च स्तर पछाडि छोडिन्छ।
तापक्रमका लागि यो २ 25 डिग्री सेल्सियसको बर्षमा स्थिर रहन्छ।
हामी पहिलेका भन्दा फरक केसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौं। यस प्रकारको मौसममा तापक्रम अघिल्लो भन्दा कम छ। जाडोमा तिनीहरू शून्य भन्दा कम र गर्मीमा हुन्छन् तिनीहरू °० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ, वर्षा एक सामान्य शासन मा छ।
समुद्री मौसम ग्राफ
यहाँ हामी पर्याप्त कम वर्षा मान र एक तापमान तापक्रम पाउँछौं। गर्मी को समयमा तिनीहरू तातो छन्। यद्यपि, तिनीहरू जाडो महिनाहरूमा तीव्र रूपमा ड्रप गर्दछन्। यो सामान्यतया एकदम सुख्खा मौसम हुन्छ।
यस प्रकारको मौसम बाकस भन्दा बिलकुलै फरक छ। त्यहाँ वर्षाको केही स्तरहरू छन् र यो अधिक हिउँ र बरफको रूपमा छ। वर्षभरि तापमान एकदम कम छ, यति धेरै तिनीहरू शून्य डिग्री भन्दा कम लामो मौसमको लागि रहन्छन्।
यस मौसममा, वर्षाले ठाउँको "ईतिहास" को बारेमा धेरै नै जानकारी प्रदान गर्दछ। जब हिउँ खस्छ, यो जम्मा हुन्छ, बरफको तह बनाउँदछ। हजारौं वर्षको सulation्ग्रहमा, आइस कोरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले हामीलाई यी सबै बर्षहरूमा ठाउँको इतिहास देखाउँदछ। हिउँको ठुलो सञ्चय तापमानको कारणले हो कि यसले पग्लिन दिदैन।
कसरी एक जलवायु चार्ट बनाउन
यस भिडियोमा तपाईं चरण-चरण जान्न सक्नुहुन्छ कसरी कुनै क्षेत्रको आफ्नै जलवायु चार्ट बनाउने:
मलाई आशा छ कि यी सबै जानकारीको साथ तपाईले विश्वको कुनै पनि क्षेत्रको मौसम राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई वर्षा र तापक्रमको स्तरहरू तुलना गर्न मात्र रोकिनुपर्दछ, सामान्य तरिकामा, कुनै क्षेत्रको मौसम। एकचोटि हामीले यी मानहरू ज्ञात गरिसकेपछि, हामी अरूहरू जस्तै हावा र वायुमण्डलीय दबावमा डुब्न सक्छौं।
र तपाईं, के तपाईंले कहिल्यै एक जलवायु चार्ट देख्नुभएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम चार्ट भनेको के हो र यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ?